Hogganaan Kooriyaa Kaabaa gara Raashiyaa imaluun prezdaant Viladmiir Putiin waliin mari’ate - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Eeshiyaa/Hogganaan Kooriyaa Kaabaa gara Raashiyaa imaluun prezdaant Viladmiir Putiin waliin mari’ate
Hogganaan Kooriyaa Kaabaa gara Raashiyaa imaluun prezdaant Viladmiir Putiin waliin mari’ate
Hoggantoonni lamaan Khmiisa har’aa magaalaa Vladivostok jedhamtu keessatti mariiin geggeessan dhimma Niwkilarii Kooriyaa kaabaa irratti kan xiyyeeffate tahuu odeeyfannoon ni addeessa. Prezdaant Kim Jong-un fi Viladmiir Putiin marii kophatti cufataanii geggeessaniin booda jila isaaniitiif ibsa walii gala kennanii jiru.
Haaluma kanaan Kim Jong-Un ibsa kenneen, mariin yeroo jalqabatiif Putiin waliin kallattiin geggeesse wal hubannoo cimaa kan uume akka taheefi, mariin kun fuuldurattis kan itti fufu tahuu hime. Prezdaant Putiin gama isaatiin, Koriyaa lamaan jiddutti nageenya dhufaa jiru mirkaneessuuf carraaqqii Kim Jong-Un godhaa jiru kan dinqisiifatu tahuu dubbate. Dabalataanis Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa jiddutti wal amantaa cimsuudhaaf, ujummoo boba’aa diriirsuu fi daandii Baaburaa biyyoota lamaan wal qunnamsiisu ijaaruuf kan walii galan tahuu ibse.
Viladmiir Putiin dhimma ijoo marii kanaa ilaalchisee yaada kenneen, Niwkilarii Kooriyaa Kaabaa ilaalchise yaada Kim Jong-un waliin mari’ate irratti, Foramii Belt Road guyyaa boruu Beejingitti jalqabamu cinatti prezdaantii Chaayinaa waliinis kan mari’atu tahuu dubbate.
Ameerikaa fi Kooriyaan Kaabaa dhimma Niwkilarii irratti mariin geggeessaa turan eega fashalaayee booda, Piyongyaang fuula isii gara Chaayinaa fi Raashiyaatti deebistee jirti.
Kooriyaa Kaabaa Raashiyaa
May 26, 2020 sa;aa 1:27 pm Update tahe